GPS / Qalabka - Geofumadas
Qalabka iyo codsiyada baaritaanka iyo cadastareerka
FARO waxay ku soo bandhigi doontaa teknolojiyaddeeda 3D-ga ee aragtida geospatial iyo dhismaha 2020 World Geospatial Forum
Si loo muujiyo qiimaha tikniyoolajiyadda geospatial ee dhaqaalaha dhijitaalka ah iyo is dhexgalka tikniyoolajiyadda soo kordhaysa ee dhinacyada kala duwan ee shaqada, shirkii sanadlaha ahaa ee World Geospatial Forum ayaa la qaban doonaa bisha soo socota ee Abril. FARO, waa isha ugu aaminka badan aduunka cabirka 3D, imaging iyo…
Hexagon wuxuu ku dhawaaqay teknoolojiyad cusub wuxuuna aqoonsaday hal-abuurnimada adeegsadayaasheeda HxGN LIVE 2019, shirarkiisa caalamiga ah ee xalalka dhijitaalka ah. Isku-dubaridka xalkaani wuxuu ku urursan yahay Hexagon AB, oo leh mowduuc xiiso leh dareemayaal, softiweer iyo teknolojiyad madax-bannaan, waxay abaabuleen afar maalmood oo shir teknolojiyad ah The Venetian ee Las Vegas, Nevada, USA.
Codsiga Leica Cyclone FIELD 360 ayaa la siiyay abaalmarinta naqshadeynta labaad ee iF DESIGN AWARD 2019. Si wada jir ah ula shaqeynta khibrada isticmaale (UX) Ergosign, Leica Geosystems waxay ku soo bandhigeen arjiga qeybta isku xirnaanta. Muddo 66 sano ah, iF DESIGN AWARD waxaa loo aqoonsaday inuu yahay garsoore tayo leh ...